Kusukela abandayo ehlobo isobho ngokuvamile efika engqondweni a hashi, abaningi kakade bored, kodwa bambalwa abantu ukhumbule futhi uqhubeke upheke lokhu dish emangalisayo, isobho abandayo ne beetroot. Kodwa kuyinto isidlo esihlwabusayo futhi unempilo hhayi kuphela. Iphinde ibuke olubabazeka kakhulu etafuleni: ngeso le ocebile beetroot umbala ipuleti, futhi ahlotshiswa konke ingcosana amakhambi. Isidlo emangalisayo ngawe nezivakashi zakho inikezwe. Wenziwe emazweni amaningi, okuyinto emenza izindlela eziningi, ezingeke kodwa jabulani ngenxa yabo, ungahlala ukhethe lowo okuthandayo.
isobho Cold ne beetroot (iresiphi wakudala)
Ngenxa yalesi iresiphi uzodinga beet (3-4 PC.), Amaqanda (3 izingcezu), yogurt (0.4 amalitha), amakhambi (dill kanye onion), kanye ukhukhamba fresh (4-5 izicucu). Leresiphi kudinga ukulungiselela owandulelayo beetroot: ke zigezwe, ehlutshiwe, uthathe cubes futhi thumba. Futhi ukupheka kufanele kube ngendlela ekhethekile: ebhodweni engeza imifino Diced futhi uthele amanzi amanzi nje ngokwanele ukuba ngokulambisa ziyabasibekela. Khona-ke acid oyifunayo, kungakuhle kakhulu, kuba efiselekayo ukusebenzisa kalamula, kodwa kungenzeka ukuphatha uviniga ubudala (apula noma yokudlela). Leli phuzu kubaluleke kakhulu, ngoba kwalokho lokhu ingxenye sizonikeza ezinemibala egqamile futhi uvumele umbala ngokuphelele off zemifino. Uphiko esidi uthele beet bese upheka konke on ukushisa low ngaphansi lid ivaliwe kuze kugcwale ukulungela. Nakuba konke lokhu Cools, ukulungiselela amaqanda: badinga kubiliswe kanzima abilisiwe, epholile futhi Chop. Ikhukhamba locezu noma grate. Hlanganisa konke epanini ne beetroot selehlile, usawoti ukunambitha futhi uthele yogurt. isobho Cold ne beetroot usulungile, ihlala yodwa ukuhlobisa it ngamakhambi fresh. Kefir luqedwe esikhundleni sayo kwafakwa uHlelo ukhilimu omuncu noma yogurt. Kunoma ikuphi, isidlo kungcono ukunikeza kancane ukuma in the esiqandisini.
isobho Cold ne beetroot kanye courgettes
Ungakwazi zihluka iresiphi, engeza zucchini nokususa yogurt. Ukuze wenze lokhu, wonke imifino kudingeka ubilise futhi iphenduke puree, okuyinto ugaye kubo kanye umhluzi blender. Usawoti kanye pepper isobho okuholela. Njengoba imihlobiso afaneleka kahle ukhilimu ushizi, kanye nedlanzana zikaphayini nati, yebo, oluhlaza.
isobho Cold ne beet kanye ham
Olunye uhlobo beetroot. Lokhu isobho wayecebe kakhulu futhi kwanelise ngenxa yokubakhona kaHamu notamatisi. Thatha izingcezu ezintathu beet, izaqathe notamatisi. Zonke Chop upheke phezu emlilweni ophansi kuze imifino impande okuphekiwe, ungakhohlwa uviniga. Landelayo udinga ukwengeza amazambane. Lapho usulungile, ukususa isobho ekushiseni epholile. Ikhukhamba kanye ham sibe yimichilo bese wengeza kuya kakade abandayo beetroot isobho, ivuse uphake. Ladle, wayithela ezitsheni, Hlobisa nge ukhilimu omuncu kanye namakhambi, futhi baba phezulu kwi nengxenye abilisiwe amaqanda kanzima abilisiwe. Njengoba ubona, isobho nge beetroot iresiphi edinga akukho zindleko extra - kwasemini kakhulu uma kushisa. Nazi izindlela eziyisisekelo, kodwa akekho azenqabelayo ukuba izame izithako. Isici esiyinhloko - beetroot, okungukuthi inikeza isizinda ukunambitheka futhi, okubaluleke kakhulu, umbala.
Atlanta - bangobani e zamaGreki?
Ayikwazanga UGrigory Rasputin ukuqeda impi?